Singubufakazi bokuthi Intshisekelo Kubuchwepheshe Bezentengiso Iyakhula! | Martech Zone
Izithameli zethu ziyakhula. Hhayi kancane njengoba kwenziwa kancane kancane eminyakeni eyishumi edlule. Ikhula njalo ngenyanga eyodwa njengoba izinkampani eziningi zanda ngokweqile ngezinqumo ezidinga ukwenziwa maqondana ubuchwepheshe bokumaketha.
Martech Zone ikhule ukufinyelela kwayo cishe 40% unyaka ngaphezu konyaka… Isilinganiso ngaphezu kwezivakashi eziyi-100,000 XNUMX njalo ngenyanga kanye ~ Ababhalisi be-imeyili abangama-75,000 (manje sesikhona CircuPress - ipulatifomu ye-imeyili esiyakhele i-WordPress). Okwethu Twitter, Facebook, Google futhi siqu Ama-akhawunti qhubeka nokuvuvukala. Uhlelo lwethu lokusebenza lweselula luyakhula ne-podcast yethu ehlanganisiwe ne Umphetho womsakazo weWebhu ifinyelele ngaphezulu kokulalela okungu-3,000,000 kule minyaka embalwa edlule. Hewu!
UVenture Beat usanda kwenza i-athikili evelele ngesimo sezimali ku umkhakha wezobuchwepheshe bokumaketha.
Izindaba ezimbi ukuthi ngaphandle kokutshalwa kwezimali okungama- $ 49.1 billion okusatshalalisiwe phakathi kwemikhiqizo yobuchwepheshe bezentengiso engama-537 ethole uxhaso olukhulu, ukungena ngokuphelele kwemikhiqizo yobuchwepheshe bokumaketha ephezulu engxenyeni ebanzi yezimboni eziyi-25 kungamaphesenti ayi-151 amabi. Lokho kuzoba ngokuyinhloko, ngaphandle kwebhola leSilicon Valley.
Akubambezeli, futhi. Scott Brinker kubika imali engaphezu kwezingu- $ 21.8 billion yobuchwepheshe bokumaketha… Okusho ukuthi igagasi lamathuluzi nobuchwepheshe seliseduze!
Kungani intshisekelo ikhula?
Ukutholwa - izinkampani bezilokhu zakha izixazululo futhi ziqala ukwakha amathuluzi abalulekile asiza izinkampani ukuthi zisebenzise futhi zilinganise imizamo yazo yokumaketha. Ukuthola amathuluzi afanele - ngokukhethwa okukhulu njengoba i-VB isho ngenhla, kunzima.
Ukukhethwa - kunezinkulungwane zezixazululo laphaya! Angicabangi ukuthi kuyamangaza ukuthi ukwakheka komhlaba kuyisicaba futhi kubanzi. Izinkampani zinethuba lokuthola amapulatifomu ahlangabezana nezidingo zawo kunokuthenga isisombululo esilingana nesinye esidinga ukuthi zishintshe izinqubo zazo.
Inani - amanani entengo e-IT ehle kakhulu kepha amanani ezobuchwepheshe bokumaketha ahlala efanayo noma aze anyuka. Lokho kuyibhamuza elithile ngombono wami, futhi sibheka futhi sabelana ngamathuluzi amaningi amasha, angabizi kakhulu afaka izinto ezicebile futhi ancintisana kakhulu namapulatifomu akhona amadala, aqhakazile futhi abizayo.
Kalula Yokusebenzisa - uma uthenge uhlelo lokuzenzakalela lokumaketha eminyakeni embalwa eyedlule, ubudinga ukutshala imali kubasebenzi abanobuchwepheshe bokuphaka nokuphatha isisombululo. Akusekho kangako. Izixazululo ezintsha seziba lula kakhulu ukuzisebenzisa nokuzihambisa, ngakho-ke amabhizinisi avulekile ukutshala imali ngaphezulu esikhaleni ngoba asikho isithiyo esibizayo sokungena.
Manje yini engekho?
Ngibeke isifaniso sokuthi ukuthengisa ubuchwepheshe bokuthengisa kuningi njengokuthengisa amafriji kubantu abalambile. Amafriji ashibhile, maningi, acebile ngesici, futhi angenza umsebenzi omuhle. Kepha azifanelekile uma ungenakho ukudla. I- ukudla yobuchwepheshe bokumaketha iqhinga nokuqukethwe okudingekayo ukufuthisa ibhizinisi lakho.
Ngoba ubuchwepheshe bokumaketha sebushibhile futhi buningi, butholwa kabanzi kepha busatshalaliswa kabi. Eminyakeni eyishumi eyedlule, umnyango wezokumaketha uzoba necebo leminyaka eminingi kanye nabasebenzi abahlelwayo ngakho konke ukuthengwa kobuchwepheshe bokukhangisa. Izinkampani eziningi kakhulu manje zisebenzisa ubuchwepheshe ngaphandle kwecebo, noma esikhundleni secebo. I- Izinto lokho okuthengiswa embonini kunika amandla abathengisi abampofu ukuthi basabalalise ubucayi obuningi obungayitholi imiphumela.
Sidinga ukukushintsha lokho! Futhi njengoshicilelo kubuchwepheshe bokumaketha, besigxile ekuguquleni lokho ngonyaka odlule. Lapho sifakwa yizinkampani kulezi zinsuku, siyamelana nokubhala ngesixazululo sazo ngaphandle kokuthi sinolwazi olunikeza ngezinkinga ezisemqoka abazama ukuzinqoba nokuthi luhlobo luni lwecebo elidinga ukufakwa nekhambi lokuphumelela. Akukona okuphathelene nezici, kumayelana nezinzuzo.
Manje yini elandelayo?
Asimile futhi sitshala isikhathi esiningi nemizamo yethu kumasu ethu okukusiza… nakhu okuzayo:
Ukuhlelwa kabusha kweSayithi - Sakha kabusha ibhulogi ezayo esizoyethula kancane kancane. Kuzosenza sibonakale sifana nokushicilelwa kwedijithali kune-blog, eyenzelwe i-interface yomsebenzisi kanye nochwepheshe bokuklama ku Phuma kuma-31. Ngifaka ukubuka kuqala ngezansi!
Ukuthuthukiswa kokuqukethwe - sisebenza eduze nethimba nobuchwepheshe kwa Ukufinyelela Kwe-Atomic ukwenza okuqukethwe kwethu futhi sisebenzisane kakhulu nabafundi bethu. Siphinde sibe nobudlelwano obuhle nababhali bamakhophi esibheke ukukhulisa ukusisiza sithuthukise okuqukethwe kwethu.
Ukuthwebula ukuhola - Sinabafundi abaningi abadinga usizo futhi abazi ukuthi bangabhekaphi. Ukuhlelwa kabusha kwethu kufaka phakathi ukuthwebula ifomu nesisombululo esabiwe ngakho konke okuthunyelwe okukodwa. Udinga usizo futhi uzokwazi ukulucela - uhanjiswe ngqo eqenjini lethu noma komunye wozakwethu.
Podcast - Sisebenzela ukuthola ochwepheshe abaningi bezimboni nabathengisi ku-podcast yethu nabantu abakhulu ku Amasu Esiza. Sizokwenza umsebenzi ongcono kakhulu wokukhuthaza imibukiso ngezingosi zethu nangezinhlelo ze-imeyili. I-podcast ifinyelela ithani labantu futhi sidinga ukwenza umsebenzi ongcono wokuyijova kuyo yonke indawo yethu nezinhlelo zokusebenza.
Mobile App - Ngeshwa, inkampani yohlelo lokusebenza lweselula eyakhe uhlelo lwethu lokusebenza ivala leyo ngxenye yebhizinisi labo, ngakho-ke sizobe sisebenzela ubunjiniyela uhlelo lokusebenza olusha lonyaka omusha olufaka izikhangiso kanye nokuhola phambili njengoba kwenza isiza sethu.
webinars - Siyalithanda iklayenti lethu IlungileTalk, Futhi sisebenzela ukukwenzela ama-webinars njalo ngenyanga eyodwa ukukusiza ngebhizinisi lakho nezidingo zobuchwepheshe bokumaketha!
Izenzakalo - Ngonyaka odlule sibe nomcimbi omangalisayo edolobheni i-Indianapolis odonse ababekhona abangaphezu kwama-250 ukuqoqa imali yosizo. Sizophishekela ukwenza lowo mcimbi omkhulu lapha e-Indianapolis - ikakhulukazi ngoba iSalesforce ihambisa ingqungquthela yayo ye-Connections iye eNew York. Sisakholelwa ukuthi kunethuba elimangalisayo lapha lengqungquthela yokumaketha nobuchwepheshe obuphakathi nendawo. Umkhosi womculo esiwunamathisele ubungezelele kakhulu!
Ividiyo - sethule Iziqeshana Zokumaketha futhi sizobe sihlanganisa ama-Podcast ethu futhi sishicilele ukusakazwa okuvamile kwamavidiyo ukusiza abafundi bethu.
Sizama nokuxhumanisa nokusebenza eduze nabanye abalingani bemboni laphaya, njenge I-Social Media Examiner, lo I-Content Marketing Institute, CopyBlogger, I-MarketingProfs, MarketingSherpa, I-New Media Expo, OyiChief Marketing Technologist, nezinhlangano ezahlukahlukene. Lezi zinhlangano zinezinsizakusebenza ezivelele zemfundo, ubuchwepheshe, izingqungquthela eziku-inthanethi, nemicimbi yaminyaka yonke esifuna ukuyisekela futhi siyikhuthaze nomphakathi wethu.
Ngokombono we-ejensi, DK New Media sekugxilwe kakhulu, kusebenza kuphela ngamapulatifomu wokumaketha, izinkampani zokumaketha, abahlinzeki bezobuchwepheshe bokumaketha nezinkampani zobuchwepheshe ngo-2014. UJenn Lisak (manje onguzakwethu) futhi ngicindezela uphawu lwe-Marketing Technology ekukhanyeni futhi nginciphisa ukubonakala kwe- DK New Media.
Ngabe ngikhulume ngokwakhiwa kabusha? Nayi indawo ephakeme. Izophendula ngokuphelele ukuze sikwazi ukuthuthukisa ulwazi lwabasebenzisi bethu bewebhu abakhula ngosuku! Onke amakhasi esayithi aklanyelwe futhi onjiniyela sebeqalile ukusebenza!
Tags: ukufinyelela kwe-athomuukuthuthukiswa kokuqukethweI-Content Marketing Instituteikhophiizenzakalophuma 31ukuhola phambiliibhulogi lokumaketha kabushaingqungquthela yezokumakethaUkumaketha i-Podcastubuchwepheshe bokumakethainhlangano yezobuchwepheshe bokumakethaibhulogi lobuchwepheshe bokumakethaama-webinar wokumakethainzuzoMarketingSherpamaphakathi nentshonalangauhlelo lokusebenza lweselulamtmwexpo entsha yemidiyaukwakhiwa kabusha kwesizaamasu amasayithiI-Social Media Examinerwebinars
Uyazi umehluko phakathi kwesiginesha yedijithali ne-E-Signature?
Amandla Okumaketha Kwe-infographic… Ngesixwayiso
Okthoba 5, 2014 ngo-8: 44 AM
Kuhle ukuba yingxenye yokuxhumana okuyimpumelelo kwe-Marketing Tech Bog. Kube unyaka omuhle wokukhula nobambiswano, futhi sijabule ngezinhlelo zethu zekusasa. Impumelelo yebhulogi yakho iyisivumelwano sokugxila kwakho, uDoug. Siyajabula ukuba sesikhiye sokukhiya nawe njengoba sikhanyisa umngcele wokumaketha wedijithali ngolwazi oluhle!
Emerald sibanyoni (@sibanyoni)
Okthoba 16, 2014 ngo-9: 57 AM
Siyakuhalalisela uDoug! Akungabazeki ukuthi usesikhundleni esishisayo, nokuthi abasebenzisi balahlekile uma kukhethwa ithuluzi elifanele lezidingo zabo. Futhi ubonile ngokufaniswa kwesiqandisi, thanda 🙂